Hofoanana ny firaisankina pro-demaokrasia ao Hong Kong lehibe indrindra, manahy fandrahonana amin’ny filaminana · Global Voices teny Malagasy
Vondrom-piarahamonina maro no nikatona noho ny NSL an'i Hong Kong
Voadika ny 23 Septambra 2021 4:31 GMT
Valandresaka ho an'ny mpanao gazety nataon'ny HKCTU tamin'ny 19 septambra 2021. Sary nalain'i Kyle Lam / HKFP. Nahazoana alàlana.
Nosoratan'i Candice Chau ity lahatsoratra manaraka ity ary navoaka tao amin'ny Hong Kong Free Press tamin'ny 20 septambra 2021. Navoaka tato amin'ny Global Voices indray izany ao anatin'ny fifanarahana fiaraha-miasa amin'ny votoaty.
Milaza ny firaisankinan'ny sendika mpomba ny demaokrasia lehibe indrindra ao Hong Kong, ny Kaonfederasion'ny Sendikàn'ny Varotra ao Hong Kong (HKCTU) fa horavana izy noho ny fandrahonana ireo mpikambana ao aminy. Ity vondrona ity no fikambanana fiarahamonim-pirenena farany nikatona tao Hong Kong taorian'ny fehezan-dalàna momba ny fiarovam-pirenena (NSL) nivoaka tamin'ny taona 2020.
Naharay hafatra ireo mpikambana ao amin'ny HKCTU tato anatin'ny andro vitsivitsy, ka mahatonga azy ireo hahatsapa fa mety hiatrika fandrahonana ny fiarovana ara-batan'izy ireo izany raha mbola manohy ny asany izy ireo, hoy ny filoha Joe Wong tamin'ny alahady 19 septambra 2021, rehefa nanambara ny fanapaha-kevitra.
Nolavin'i Wong ny filazan'ireo fampahalalam-baovao mpomba an'i Beijing fa mpiasa ho an'ny vondrona vahiny [mpitsikilo] ny HKCTU, izay mety heverina fa fandikan-dalàna amin'ny NSL .
Nilaza izy fa niasa tamina tetikasa sasantsasany ny konfederasiona niaraka tamin'ny Solidarity Centre, fikambanana eo ambany Federasiona Amerikanina momba ny asa sy ny Kongresin'ny FikambananaIndostrialy, mikasika ny fampiroboroboana ny zon'ny mpiasa sy ny fifampiraharahana iraisana izay tsy misy idiran'ny hetsika ara-politika velively.
Nijanona tsy niara-niasa tamin'ny centre ny HKCTU talohan'ny volana jolay tamin'ny herintaona, rehefa nanomboka nanan-kery ny lalàna mifehy ny fiarovana.
Nolavin'i Wong ihany koa ny fanambarana iray hafa nataon'ny gazety Wen Wei Po ao Hong Kong fehezin'i Beijing fa fikambanana ara-politika miafina amin'ny anarana sendikà transnasionaly ny Fikambanan'ny Sendikàn'ny Varotra Iraisampirenena (ITUC) izay misy ny Kaonfederasiona ao Hong Kong.
Nilaza ny filoha fa ny ITUC no kaonfederasiona sendikaly lehibe indrindra manerantany. Nampiantrano vondrona mpitsidika avy amin'ny ITUC ny Federasionan'ny Sendikàn'ny Varotra Manerana an'i Shina Manontolo ankatoavin'i Beijing, ary nasaina hanatrika ny fivoriambe iraisampirenena amin'ny maha mpanatrika azy. Nosoritan'i Wong:
Workers’ movements always stressed international solidarity. The HKCTU cooperating or connecting with unions in other regions is natural and justifiable, the government never said in the past 30 years that this is in violation of any laws… The regime, through state media, has described participation in international unions as colluding with foreign forces. This is a great interference with workers’ rights to participate in unions. [Is this our highlight or thiers?]
Nanantitrantitra ny firaisankina iraisampirenena hatrany ny hetsiky ny mpiasa. Ara-dalàna sy azo hamarinina ny fiarahamiasa sy ny fifandraisan'ny HKCTU amin'ireo Sendikà any amin'ny faritra hafa, tsy mbola nilaza mihitsy tao anatin'ny 30 taona lasa ny governemanta misy fanitsakitsahana ny lalàna misy rehetra ao… Namariparitra fandraisana anjara amin'ireo sendikà iraisampirenena ho firaisana tsikombakomba amin'ny hery ivelany (vahiny) ny fitondrana, tamin'ny alàlan'ny fampahalalam-baovaom-panjakana. Fitsabahana lalina amin'ny zon'ny mpiasa handray anjara amin'ny sendika izany. [Songadinay ve ity sa an'ny hafa?]
Natsangana tamin'ny taona 1990, nisolo tena fikambanana efa ho 100 izay ahitana mpikambana manodidina ny 145000 ny HKCTU hatramin'ny farany teo. Saingy mpikambana manodidina ny 10 no rava vao haingana.
Ny fizotran'ny fanafoanana
Nandany vato fitsipaham-pitokisana ny komity mpanatanteraky ny HKCTU tamin'ny 16 septambra mba hanombohana ny fanafoanana, ary halaina amin'ny fivorian'ny mpikambana manokana amin'ny 3 Oktobra ny latsa-bato.
Nametra-pialàna ny rehetra ankoatra ny komity mpanatanteraka efatra, ahitana an'i Wong, filoha lefitra Leo Tang, mpitahiry vola Chung Chung-Fai, ary ny sekretera jeneraly Lee Cheuk-yan izay mbola miasa. Any am-ponja i Lee amin'izao fotoana izao noho ny fiampangana mifandraika amin'ny fanaovana fihetsiketsehana.
Nilaza tamin'ny namany tao amin'ny Facebook i Mung Siu-Tat, lehibe mpanatateraka ao amin'ny HKCTU tamin'ny 18 septambra fa efa nametra-pialana izy ary nandao an'i Hong Kong:
Niharatsy haingana ny toe-javatra tao amin'ny fiaraha-monina, ary mby akaiky manokana ny fanahiana ara-politika [atrehiko]. Mifototra amin'ny fiheverana ny fiarovana, tsy maintsy nandray fanapaha-kevitra maika handao an'i Hong Kong aho. Ny hery mahery vaika dia nanery ahy hanao fanapahan-kevitra maharary sy ka nialako ireo anjara asako roa amin'ny maha-lehiben'ny mpanatanteraka sy amin'ny maha-raim-pianakaviana.
Nitsahatra tamin'ny asany ireo fandinihana ny lalàna momba ny asa sy ny fanomezana isam-bolana ho an'ny HKCTU ary nilaza ny Konfederasiona fa najanony ny fandraisana an-tanana ireo raharaha handraisana mpikambana vaovao.
Vao lasa vondrona mpanohitra lehibe indrindra tany Hong Kong hofoanana ny HKCTU, taorian'ny nanambaràn'ny sendikàn'ny mpampianatra lehibe indrindra tao an-tanàna, ny sendikan'ny mpampianatra matihanina ao Hong Kong, ary ny fiaraha-mientan'ny Mandatehezan'ny zon'olombelona sivily ny fanapahan-keviny hihidy.
Nisaoran'i Wong i Lee sy i Carol Ng filoha teo aloha, izay migadra miandry fitsarana amin'ny raharaha fiarovam-pirenena, noho ny fandraisan'izy ireo anjara amin'ny Konfederasiona sy ny hetsiky ny mpiasa ao Hong Kong ary niala tsiny tamin'ny fanapahan-kevitra hanafoana ny fikambanana:
Te-hiala tsiny aho eto amin'ireo mpikambana sy ny vahoaka Hong Kong, fa tsy afaka hikiry ny HKCTU.